भगवानले प्रार्थना सुनिदिएपछि पुछिन लागेको सिउँदो रोकियो, १४ वर्षपछि श्रीमान भेट्दा भावविह्वल ! «
भगवानले प्रार्थना सुनिदिएपछि पुछिन लागेको सिउँदो रोकियो, १४ वर्षपछि श्रीमान भेट्दा भावविह्वल !
Published : 28 January, 2020 11:33 am
एक सच्चा श्रीमतीले गरेको चित्कार भगवानले सुनीदिएका छन्। विरानो मुलुकमा पुछिन लागेको श्रीमतीको सिउँदो भगवानसंगको निरन्तर प्रार्थनाले फिर्ता भएको छ। ७५ वर्षीय आमलाइ सम्हालिनै नसकिने गरि खुसी थपिएको छ।
बुवाको अनुहार देख्न नपाएको छोराको आँखाबाट आँसुको बर्षात भएको छ। १४ वर्षपछि आमा श्रीमती र छोरालाइ भेट्न पुगेका उमेश यादव आफु पनि मन थाम्न सकेनन।